ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေ ဘယ်ကဝင်ငွေတွေရပြီး ကျိကျိတက်ချမ်းသာနေရသလဲ?
10 May 2018 . 6:22 PM
သာမန်လူတွေအတွက်တော့ ကိုယ့်နေ့စဉ်အလုပ်ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေရစေတဲ့ အကြောင်းအရင်းပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေအတွက်ကျတော့ ဒီလောက်များပြားကြွယ်ဝလှတဲ့ စည်းစိမ်ဥစ္စာတွေကုို ဘယ်ကရသလဲဆိုတာ မေးခွန်းထုတ် စဉ်းစားစရာပါပဲ။
ဗြိတိန်တော်ဝင်ဘုရင်မ အဲလိဇဘက် ( Queen Elizabeth II ) နဲ့ ဗြိတိသျှတော်ဝင်မိသားစုတွေမှာတော့ ဝင်ငွေရနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်တွေအများကြီးပါပဲ။ သတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ တွက်ချက်မှုအရ ဘုရင်မကြီးရဲ့ ကိုယ်ပိုင်ဝင်ငွေကြွယ်ဝမှုဟာ ပေါင် ၃၆၀ သန်း (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၀ သန်း) ရှိပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘုရင်မကြီးထက်ကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့ ဗြိတိန်လူမျိုး ၃၂၀ ကျော်လည်း ရှိပါသေးတယ်။
တော်ဝင် ဘုရင်မကြီးနဲ့ သားတော် မင်းသားကြီး ချားလ် (Prince Charles) အနေနဲ့ သူတို့ရဲ့ဝင်ငွေအများစုကို အစိုးရနဲ့ ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရာတွေကနေ ရရှိတာဖြစ်ပြီး တခြားမိသားစုဝင်တွေဖြစ်တဲ့ မင်းသား ဝီလျံ( Prince William) နဲ့ ဇနီး ကိတ်မစ်ဒယ်တန် (Kate Middleton) ၊ မင်းသားဟယ်ရီ (Prince Harry ) နဲ့ မေလ ၁၉ ရက်နေ့မှာ လက်ထပ်တော့မယ့် မီဂန် မာကယ် (Meghan Markle) တို့ရဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကလည်း သန်းနဲ့ချီဝင်ငွေတွေရနေတာဖြစ်ပါတယ်။
Prince Philip, Duke of Edinburgh, Prince Harry, Catherine, Duchess of Cambridge and Prince William, Duke of Cambridge.
ဘုရင်မကြီးရဲ့ အဓိက ဝင်ငွေတွေကတော့ အစိုးရကနေ သက်ဦးဆံပိုင်ဘုရင်တွေအတွက် နှစ်စဉ်ပေးအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့ကြေးငွေတွေရယ်၊ ဘုရင့်အပိုင်စား Lancaster မြို့နယ်ပိုင်မြေတွေနဲ့ သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေကနေ ရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
ဘုရင်မကြီးအတွက် ပေးအပ်တဲ့ထောက်ပံ့ကြေးငွေတွေဟာဆိုရင် တစ်နှစ်စာကို ခရီးသွားစရိတ်၊ လုံခြုံရေး၊ ဝန်ထမ်းရေးနဲ့ တော်ဝင်နန်းတော်ရေးကိစ္စတွေပါ အပါအဝင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းထိ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမရဲ့ ကိုယ်ပိုင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတွေဟာဆိုရင်လည်း မိဘဘိုးဘွား တော်ဝင်အမွေတွေဖြစ်တဲ့ “Balmoral Castle” အပါအဝင် ဘုရင်မကြီးရဲ့ ဖခမည်းတော်ဖြစ်တဲ့ ဆဌမမြောက် ဂျော့ခ်ျ ဘုရင်ကြီး ( King George VI) ရဲ့ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အမွေတွေဖြစ်တဲ့ အနုပညာမြောက် လက်ရာတွေအပြင် တံဆိပ်ခေါင်းစုစည်းမှုတွေကနေ ရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။
တခြားဝင်ငွေဖြစ်တဲ့ ဘုရင့်မြို့စားပိုင်နက် “The Duchy of Lancaster” ဟာဆိုရင်လည်း နှစ်ရာပေါင်းများစွာတည်းက တော်ဝင်မိသားစုပိုင်ဖြစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ခုနှစ် နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုစစ်တမ်းတွေအရ ၁၈၄၃၃ ဟက်တာ ထိကျယ်ပြန့်ခဲ့တဲ့အပြင် တော်ဝင်မိသားစုအတွက် “The Privy Purse” လို့ခေါ်တဲ့ အဓိကဝင်ငွေလမ်းကြောင်း ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
The Duchy of Lancaster Castle
ကြွယ်ဝချမ်းသာလာတဲ့အခါမှာလည်း ဘုရင်မကြီးက သူမရဲ့ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုဝင်ငွေတွေကတဆင့် အစိုးရကို အခွန်ပြန်ဆောင်ခဲ့ပေမယ့် အခွန်ပမာဏကိုတော့ လျှို့ဝှက်ထားခဲ့ပါတယ်။ သူမရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေအားလုံးကို ပြန်လည်မရောင်းချသရွေ့ တော်ဝင်မျိုးနွယ်ဖွားအဆင့်ဆင့်ကသာ လက်ဆင့်ကမ်း ပိုင်ဆိုင်ရတော့မှာပါ။
တော်ဝင်မိသားစုရဲ့ ဝင်ငွေတွေ၊ ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုအထွေထွေကတော့ အပေါ်ကဖော်ပြခဲ့တဲ့ အဓိက လမ်းကြောင်း ၃ ခုကနေ စီးဆင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ နေထိုင်မှုပုံစံ ခမ်းနားအဆင့်မြင့်သလိုပဲ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေလည်း ထင်ထားတာထက် ရှုပ်ထွေးတဲ့ ဗြိတိန်တော်ဝင်မိသားစုတွေရဲ့ ငွေကြေးကြွယ်ဝမှုတွေကတော့ သားစဉ်မြေးဆက် သုံးမကုန်အောင်ပါပဲ။
ဗွိတိနျတျောဝငျမိသားစုတှေ ဘယျကဝငျငှတှေရေပွီး ကြိကြိတကျခမျြးသာနရေသလဲ?
သာမနျလူတှအေတှကျတော့ ကိုယျ့နစေ့ဉျအလုပျဟာ ကိုယျ့ရဲ့ဝငျငှရေစတေဲ့ အကွောငျးအရငျးပါပဲ။ ဒါပမေယျ့ ဗွိတိနျတျောဝငျမိသားစုတှအေတှကျကတြော့ ဒီလောကျမြားပွားကွှယျဝလှတဲ့ စညျးစိမျဥစ်စာတှကေို ဘယျကရသလဲဆိုတာ မေးခှနျးထုတျ စဉျးစားစရာပါပဲ။
ဗွိတိနျတျောဝငျဘုရငျမ အဲလိဇဘကျ ( Queen Elizabeth II ) နဲ့ ဗွိတိသြှတျောဝငျမိသားစုတှမှောတော့ ဝငျငှရေနိုငျတဲ့ အရငျးအမွဈတှအေမြားကွီးပါပဲ။ သတငျးမီဒီယာတှရေဲ့ တှကျခကျြမှုအရ ဘုရငျမကွီးရဲ့ ကိုယျပိုငျဝငျငှကွှေယျဝမှုဟာ ပေါငျ ၃၆၀ သနျး (အမရေိကနျဒျေါလာ ၄၆၀ သနျး) ရှိပါတယျတဲ့။ ဒါပမေယျ့ ဘုရငျမကွီးထကျကွှယျဝခမျြးသာတဲ့ ဗွိတိနျလူမြိုး ၃၂၀ ကြျောလညျး ရှိပါသေးတယျ။
တျောဝငျ ဘုရငျမကွီးနဲ့ သားတျော မငျးသားကွီး ခြားလျ (Prince Charles) အနနေဲ့ သူတို့ရဲ့ဝငျငှအေမြားစုကို အစိုးရနဲ့ ကိုယျပိုငျအိမျရာတှကေနေ ရရှိတာဖွဈပွီး တခွားမိသားစုဝငျတှဖွေဈတဲ့ မငျးသား ဝီလြံ( Prince William) နဲ့ ဇနီး ကိတျမဈဒယျတနျ (Kate Middleton) ၊ မငျးသားဟယျရီ (Prince Harry ) နဲ့ မလေ ၁၉ ရကျနမှေ့ာ လကျထပျတော့မယျ့ မီဂနျ မာကယျ (Meghan Markle) တို့ရဲ့ ရနျပုံငှတှေကေလညျး သနျးနဲ့ခြီဝငျငှတှေရေနတောဖွဈပါတယျ။
ဘုရငျမကွီးရဲ့ အဓိက ဝငျငှတှေကေတော့ အစိုးရကနေ သကျဦးဆံပိုငျဘုရငျတှအေတှကျ နှဈစဉျပေးအပျတဲ့ ထောကျပံ့ကွေးငှတှေရေယျ၊ ဘုရငျ့အပိုငျစား Lancaster မွို့နယျပိုငျမွတှေနေဲ့ သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျ ပိုငျဆိုငျမှုတှေ၊ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှကေနေ ရရှိနတောဖွဈပါတယျ။
ဘုရငျမကွီးအတှကျ ပေးအပျတဲ့ထောကျပံ့ကွေးငှတှေဟောဆိုရငျ တဈနှဈစာကို ခရီးသှားစရိတျ၊ လုံခွုံရေး၊ ဝနျထမျးရေးနဲ့ တျောဝငျနနျးတျောရေးကိစ်စတှပေါ အပါအဝငျ အမရေိကနျဒျေါလာ ၅၈ သနျးထိ ရရှိတာဖွဈပါတယျ။
သူမရဲ့ ကိုယျပိုငျ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုတှဟောဆိုရငျလညျး မိဘဘိုးဘှား တျောဝငျအမှတှေဖွေဈတဲ့ “Balmoral Castle” အပါအဝငျ ဘုရငျမကွီးရဲ့ ဖခမညျးတျောဖွဈတဲ့ ဆဌမမွောကျ ဂြော့ချြ ဘုရငျကွီး ( King George VI) ရဲ့ မြိုးရိုးစဉျဆကျအမှတှေဖွေဈတဲ့ အနုပညာမွောကျ လကျရာတှအေပွငျ တံဆိပျခေါငျးစုစညျးမှုတှကေနေ ရရှိတာဖွဈပါတယျ။
တခွားဝငျငှဖွေဈတဲ့ ဘုရငျ့မွို့စားပိုငျနကျ “The Duchy of Lancaster” ဟာဆိုရငျလညျး နှဈရာပေါငျးမြားစှာတညျးက တျောဝငျမိသားစုပိုငျဖွဈခဲ့ပွီး ၂၀၁၇ ခုနှဈ နယျမွပေိုငျဆိုငျမှုစဈတမျးတှအေရ ၁၈၄၃၃ ဟကျတာ ထိကယျြပွနျ့ခဲ့တဲ့အပွငျ တျောဝငျမိသားစုအတှကျ “The Privy Purse” လို့ချေါတဲ့ အဓိကဝငျငှလေမျးကွောငျး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ကွှယျဝခမျြးသာလာတဲ့အခါမှာလညျး ဘုရငျမကွီးက သူမရဲ့ ရငျးနှီးမွုပျနှံမှုဝငျငှတှေကေတဆငျ့ အစိုးရကို အခှနျပွနျဆောငျခဲ့ပမေယျ့ အခှနျပမာဏကိုတော့ လြှို့ဝှကျထားခဲ့ပါတယျ။ သူမရဲ့ ပိုငျဆိုငျမှုတှအေားလုံးကို ပွနျလညျမရောငျးခသြရှေ့ တျောဝငျမြိုးနှယျဖှားအဆငျ့ဆငျ့ကသာ လကျဆငျ့ကမျး ပိုငျဆိုငျရတော့မှာပါ။
တျောဝငျမိသားစုရဲ့ ဝငျငှတှေေ၊ ကွှယျဝခမျြးသာမှုအထှထှေကေတော့ အပျေါကဖျောပွခဲ့တဲ့ အဓိက လမျးကွောငျး ၃ ခုကနေ စီးဆငျးနတောဖွဈပါတယျ။ နထေိုငျမှုပုံစံ ခမျးနားအဆငျ့မွငျ့သလိုပဲ ပိုငျဆိုငျမှုတှလေညျး ထငျထားတာထကျ ရှုပျထှေးတဲ့ ဗွိတိနျတျောဝငျမိသားစုတှရေဲ့ ငှကွေေးကွှယျဝမှုတှကေတော့ သားစဉျမွေးဆကျ သုံးမကုနျအောငျပါပဲ။